Safiirada Somalia ee dibeda oo la xadiday & qaar ka mid ah shaqaalaha W/Arrimaha dibeda oo la eryey | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Safiirada Somalia ee dibeda oo la xadiday & qaar ka mid ah shaqaalaha W/Arrimaha dibeda oo la eryey
Iyadoo dhowaanahan ay socdeen qorsheyaal wasaarada arrimaha dibeda ee Somalia ay ku dooneysay iney dib u habeyn ugu sameyso safaaradaha dowladu ku leedahay caalamka ayaa waxaa haatan soo baxaya warar kala duwan oo arimahaas ku saabsan.
Guddi dhowaan loo saaray inuu soo qiimeeyo kana talo bixiyo dib u habeynta lagu sameeynayo safaaradaha dibeda ayaa soo saaray talooyin ay ka mid yihiin in illaa 30 safaaradood ay Somalia ka furato dalalka saaxiibada, lana bedelo safiirada hadda ka howlgala oo qaarkood loo heysto eedeeymo kala duwan.
Hase ahaatee in safaaradaha dibeda laga dhigo 30 ayaa waxaa ilo wareedyo lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan inuu ka soo horjeestay madaxweynaha Somalia Xasan Shiikh Maxamuud oo xusay in 30 safiir aan loo heli dhaqaale, lagana dhigo 20 taasoo la sheegay in ugu dambeyntii ay u badan tahay in la isku raacay iyadoo dhowaana la horgeyn doono golaha wasiirada go’aankaas.
Dhinaca kale, warar laga helayo xarunta wasaarada arrimaha dibeda ee Somalia oo ku taala magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradaas shaqada laga eryey iyadoo aan la ogeyn sababta.
Shaqaalaha ka eryey ayaa warar xog ogaal ah waxay sheegayaan iney gaarayaan illaa 50, waxaana wararku ay sheegayaan in wasaaradu ay qaadaneyso kuna bedeleyso shaqaale cusub oo ka tirsan koox diimeedka loo yaqaanoi Damul-jadiid ee uu xubinta ka yahay madaxweynaha Somalia kuwasoo ka go’ay ururka Al-Islaax
Waa hadaad Run sheeg tahay!!!1 Sanadkii Guusha 2013